कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सीआइबीको छापा, आधा दर्जन उच्च तहका कर्मचारी पक्राउ ! (नामावलीसहित)
ARCHIVE, POWER NEWS » कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सीआइबीको छापा, आधा दर्जन उच्च तहका कर्मचारी पक्राउ ! (नामावलीसहित)
काठमाडौँ - कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा छापा मारी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)ले आधा दर्जन कर्मचारीहरुलाई पक्राउ गरेको छ । एक नीजी कम्पनीका मालिकलाई थाहा नै नदिई उनको नाममा रहेको सेयर अर्को व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्न लागेको सुराकीका आधारमा उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको स्रोतको दावी छ । नामसारीपछि ति व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा बिक्रि गर्न थालिएको समेत स्रोतको भनाइ छ । पक्राउ परेकाहरु माथि कागजात किर्ते गरेको आरोप लागेको बताईएको छ ।
पक्राउ पर्नेमा उप रजिस्ट्रारहरु गंगाधर पौडेल र धर्मराज रोकाया , सह रजिस्ट्रार उमेश मान जोशी , आईटी बिभागका कर्मचारीगरी ६ जना छन् । सीआईबी प्रबक्ता सानुराम भट्टराईले उनीहरुलाई पक्राउ परेको पुष्टि गरेका छन् ।